ရင်သွေးငယ်များ ဂေဟာကို အောက်လမ်းနည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်တာခံနေရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Suehninsi
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပြင်ပပရဟိတအလုပ်တွေအပြင် ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာကိုပါ တည်ထောင်ပြီး ကလေးတွေကို ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ပရဟိတအလုပ်အပြင် အနုပညာအလုပ်တွေပါ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေရသူမို့ အားပေးချီးမွမ်းတဲ့သူတွေရှိသလို ဝေဖန်သူတချို့ရဲ့ဒဏ်ကိုလည်း ခံနေရသူပါ။ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူတစ်ယောက်မို့
အားပေးချစ်ခင်သူပရိသတ်ပိုများသော်လည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောက်တန်းကျကျတိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်းကိုတော့ ခိုင်နှင်းဝေက မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “မနေ့က ကျိုက်မရောဆရာတော်ကြီး ထံသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ရင်း ဂေဟာ မှာ အတိုက်အခိုက် အတားအဆီးအနှောင့်အယှက်တွေ
ရှိနေတယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားပြီး ဂေဟာကိုလာစစ်ပေးဖို့ ဒီနေ့ပဲ ဆရာတော်ကျောင်းက အဘ တယောက်ကို ပင့်ဖိတ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တော့…. အဘက အာရုံပြုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဂေဟာရှေ့က ရွက်လှပင်အောက်မှာ ရှိတယ်လို့ မိန့်တော့ ကျွန်မတို့ ချက်ချင်း ဆယ်ယူကြည့်တဲ့အခါ တကယ်ပဲ
အင်းပြားတွေ တွေ့လိုက်ပါတယ်ရှင်…. အဲဒီအင်းပြားက လူသေကောင်တွေမှာပတ်တဲ့အဝတ်စ.ပိတ်ဖြူနဲ့လုပ်ထားတာတဲ့… ကျွန်မ ကလေးတွေအတွက်တော့ စိတ်ပူမိတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကတော့ အားလုံးကို မေတ္တာထားပါတယ်. ဒီလိုလုပ်တဲ့သူကိုလဲကျမ ဒီကနေမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်. စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်…. ဘယ်အောက်လမ်းနည်းနဲ့ပဲလုပ်လုပ်
ကျွန်မရဲ့ သူတပါးပေါ်ထားတဲ့ တကယ့်စေတနာ နဲ့ ရိုးသားမူကို စိတ်လုံတဲ့အတွက် ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါဘူးရှင်” ဆိုပြီး မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဘဝကို ဘယ်လိုပဲ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းနေပါစေ မနာလိုမုန်းထားတဲ့သူတွေကတော့ ရှိစမြဲပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ မကျေနပ်ပါစေ ဒီလိုယုတ်မာပြီး အောက်တန်းကျတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ တိုက်ခိုက်တာကတော့ တကယ်ကို မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေပါပဲနော်။
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပွငျပပရဟိတအလုပျတှအေပွငျ ခိုငျနှငျးဝရေငျသှေးလေးမြားဂဟောကိုပါ တညျထောငျပွီး ကလေးတှကေို ရငျအုပျမကှာစောငျ့ရှောကျနသေူတဈယောကျပါ။ ပရဟိတအလုပျအပွငျ အနုပညာအလုပျတှပေါ တှဲဖကျလုပျကိုငျနရေသူမို့ အားပေးခြီးမှမျးတဲ့သူတှရှေိသလို ဝဖေနျသူတခြို့ရဲ့ဒဏျကိုလညျး ခံနရေသူပါ။ကလေးတှကေို ပွုစုစောငျ့ရှောကျနသေူတဈယောကျမို့
အားပေးခဈြခငျသူပရိသတျပိုမြားသျောလညျး မထငျမှတျထားလောကျအောငျ အောကျတနျးကကြတြိုကျခိုကျခံနရေကွောငျးကိုတော့ ခိုငျနှငျးဝကေ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ “မနကေ့ ကြိုကျမရောဆရာတျောကွီး ထံသို့ သှားရောကျဖူးမြှျောရငျး ဂဟော မှာ အတိုကျအခိုကျ အတားအဆီးအနှောငျ့အယှကျတှေ
ရှိနတေယျလို့ ဆရာတျောကွီးက မိနျ့ကွားပွီး ဂဟောကိုလာစဈပေးဖို့ ဒီနပေဲ့ ဆရာတျောကြောငျးက အဘ တယောကျကို ပငျ့ဖိတျပွီးစဈဆေးကွညျ့တော့…. အဘက အာရုံပွုကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ဂဟောရှကေ့ ရှကျလှပငျအောကျမှာ ရှိတယျလို့ မိနျ့တော့ ကြှနျမတို့ ခကျြခငျြး ဆယျယူကွညျ့တဲ့အခါ တကယျပဲ
အငျးပွားတှေ တှလေို့ကျပါတယျရှငျ…. အဲဒီအငျးပွားက လူသကေောငျတှမှောပတျတဲ့အဝတျစ.ပိတျဖွူနဲ့လုပျထားတာတဲ့… ကြှနျမ ကလေးတှအေတှကျတော့ စိတျပူမိတယျ… ဘာပဲဖွဈဖွဈကြှနျမကတော့ အားလုံးကို မတ်ေတာထားပါတယျ. ဒီလိုလုပျတဲ့သူကိုလဲကမြ ဒီကနမေတ်ေတာပို့လိုကျပါတယျရှငျ. စတေနာကောငျးရငျကံကောငျးမယျဆိုတာကြှနျမယုံကွညျပါတယျ…. ဘယျအောကျလမျးနညျးနဲ့ပဲလုပျလုပျ
ကြှနျမရဲ့ သူတပါးပျေါထားတဲ့ တကယျ့စတေနာ နဲ့ ရိုးသားမူကို စိတျလုံတဲ့အတှကျ ဘာမှ မစိုးရိမျပါဘူးရှငျ” ဆိုပွီး မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ.. ဘဝကို ဘယျလိုပဲ အကောငျးဆုံးလြှောကျလှမျးနပေါစေ မနာလိုမုနျးထားတဲ့သူတှကေတော့ ရှိစမွဲပါ။ ဘယျလောကျပဲ မကနြေပျပါစေ ဒီလိုယုတျမာပွီး အောကျတနျးကတြဲ့နညျးလမျးနဲ့ တိုကျခိုကျတာကတော့ တကယျကို မလုပျသငျ့တဲ့အရာတှပေါပဲနျော။